Na ny ankizy aza hizara ny finoany
« Fa nony hitan’ny lohan’ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna ny zavatra mahagaga izay nataony sy ny ankizy madinika miantso eo an-kianjan’ ny tempoly ka manao hoe: Hosana ho an’ ny Zanak’ i Davida ! - dia tezitra izy ka nanao taminy hoe: Renao va izay lazain’ireo? Dia hoy Jesosy taminy: Eny; tsy mbola novakinareo va ny teny manao hoe: Avy amin’ny vavan’ny ankizy madinika sy ny zaza minono no nanamboaranao fiderana ? »Mat. 21:15,16.
Azon'ny lehilahy sy vehivavy manetry tena asandratra ny fanevan'ny fahamarinana; ary ny tanora sy ny ankizy mihitsy aza no fitahiana ho an'ny hafa, rehefa manambara ny zavatra nataon'ny fahamarinana taminy izy ireo. Hampiasa fitaovana malemy indrindra Andriamanitra, raha milefitra tanteraka aminy izy ireo. Afaka miasa amin'ny alalan'izy ireo Izy mba hambabo fanahy izay tsy azon'ny mpanompon'Andriamanitra tratrarina. Misy lalambe sy lalankely tokony hokatsahina. Miaraka amin'ny Baiboly eny an-tananao, ny fonao mafana sy entanin'ny fitiavan'Andriamanitra, no handehananao sy hanambaranao amin'ny hafa ny fanandramanao; afaka ny hampahafantatra azy ireo ny fahamarinana nanohina ny fonao ianao, my hivavaka amim-pinoana mba hampahombiazan'Andriamanitra ny ezaka ataonao ho famonjena azy ireo. Ampitao ny fahazavana, dia hahazo fahazavana bebe kokoa hampitaina ianao. Ary lasa mpiara-miasa amin'Andriamanitra ianao.
Irin'Andriamanitra ny ampiasain'ny zanany ny heriny rehetra, ka ny asa ataony ho fitahiana ny hafa dia hahatonga azy ireo hahery ao amin'ny herin'i Jesôsy. Mety tsy manam-pahalala ianao, mety tsy afaka hanao asa lehibe ho an'Andriamanitra ianao, indro anefa misy zavatra azonao atao. Azonao atao ny hamela ny fahazavanao hanazava ny hafa (...).
Mety misy manana fahalalana ny fahamarinana, ary maneho toetra tsara. Aoka hiasa àry ianao ranadahiko sy rahavaviko. Aoka hahazo fanandramana amin'ny fiasana ho an'ny hafa. Mety hanao fahadisoana ianao; fa tsy afa-bela amin'izany koa na ireo manan-tsaina indrindra aza, ary nanao an'izany ombieny ombieny koa ireo manana andraikitra lehibe. Mety tsy hahomby mandrakariva ianao; kanefa tsy ho azonao an-tsaina ny vokatra avy amin'ny ezaka feno fanetren-tena sy tsy misy fitiavan-tena hanampiana ireo izay ao anatin'ny haizina. Amin'ny alalan'ny fiasan'ny Fanahy Masina, dia mety hahazo fanahy hiala amin'ny hevi-diso ho amin'ny fahamarinana ianao, ary eo am-panaovana izany dia ho feno ny fitiavan'Andriarnanitra ny fanahinao.